Su'aalaha la isweydiiyo - Xiamen Joint Tech Co., Ltd.
Halkee baan ka dalban karaa baabuurkayga?
Guriga ku yaal garaashka / waddada gaarka loo leeyahay, ama meel baabuurta la dhigto oo la cayimay / goob baarkin la wadaago (caadi u ah guryaha).
Shaqada goobta baabuurta la dhigto ee dhismaha xafiiskaaga, ha ahaato mid gaar loo leeyahay ama (badh) dadweyne.
Dadweynaha hareeraha waddooyinka, waddada weyn, iyo goob kasta oo baabuurta la dhigto waxaad ka fikiri kartaa - tusaale suuqyada dukaamaysiga, makhaayadaha, hoteelada, isbitaallada iwm. Haddii “wada shaqaynta” la hawlgeliyo, waxaad awood u leedahay inaad lacag ka qaaddo bixiyeyaasha saldhigga lacag -bixinta kala duwan.
Mudo intee leeg ayay qaadataa in lagu dallaco baabuurkayga?
Waqtiyada lacag -bixintu way kala duwan yihiin waxayna ku xiran tahay: heerkaaga hadda ee batteriga, awoodda bateriga, awoodda saldhiggaaga lacag -bixinta iyo dejinta, iyo sidoo kale awoodda ilaha tamarta ee saldhigga lacag -bixinta (tusaale ahaan haddii ay tahay guriga ama dhisme xafiis).
Beelaha korontada ku shaqeeya waxay u baahan yihiin 1-4 saacadood in si buuxda loo dallaco, halka baabuurta korontada ku shaqeeya ay u baahan yihiin 4-8 saacadood (laga bilaabo 0 illaa 100%). Celcelis ahaan, baabuurtu waxay dhigtaan guriga ilaa 14 saacadood maalintii, shaqadana qiyaastii 8 saacadood maalintii. Iyada oo aad haysato saldhigga lacag -bixinta, waqtigaan oo dhan waxaa loo isticmaali karaa in lagu buuxiyo gaarigaaga 100%.
Meesha korontada ee joogtada ah: Ka digtoonow haddii aad EV ka dalbanayso korontada caadiga ah. Ku -dallacidda guriga waxay u baahan doontaa fiilo lacag -bixin oo gaar ah oo ka hortagaysa koronto -la’aanta iyo kulaylka badan. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad hubiso in meesha laga soo baxo ay ku dhowdahay gaarigaaga, maadaama aadan waligaa u adeegsan karin fiilo dheereyn si aad lacag uga qaadato baabuurkaaga. Hase yeeshee, xitaa haddii taxaddarradan la qaaday, lacag ka qaadista saldhigga caadiga ah aad bay u niyad -jabsan tahay, maaddaama inta badan dhismayaasha la deggan yahay aan loo xirin si ay u qaadaan barbaro koronto oo sarreysa. Wakhtiyada lacagtu waxay ku xirnaan doontaa waddanka aad joogto
EV Charging station: Kani waa habka ugu badan ee lagu talinayo in baabuurka lagu dallaco, maadaama ay ka dhigayso badbaado iyo hufnaan isticmaalka baabuurkaaga iyo ilaha tamarta (tusaale guriga ama dhismaha xafiiska). Iyada oo aad haysato saldhigga lacag -bixinta, mar kasta oo aad waddada gasho waxaa hubaal ah inaad haysato baabuur si buuxda u buuxsan oo leh baaxadda ugu badan. Saldhigga lacag -bixinta wuxuu ku dallaci karaa ilaa 8 jeer ka dhakhso badan kan caadiga ah. Taas macnaheedu waa in wixii EV ah 100% lagaa qaadi doono 1-4 saacadood gudahood. Ka hel dulmar guud oo ku saabsan waqtiyada lacag -bixinta awoodaha batteriga ee ugu badan halkan.
Saldhigga lacag -bixinta degdegga ah: Saldhigyada lacag -bixinta degdega ah ayaa inta badan ka soo baxa bannaanka magaalooyinka iyo waddooyinka waaweyn. In kasta oo uu dhakhso yahay (wuxuu ku dallacayaa 20-30 daqiiqo), celcelis ahaan xeedho degdeg ahi wuxuu keenaa EV kaliya ilaa 80% inta lagu jiro kalfadhi lacag-bixin ah. Sababo la xiriira qalabka iyo qalabka qaaliga ah ee saldhigyada lacag -bixinta degdegga ah, fiilooyinkaan waxaa badanaa la iibsadaa oo lagu dhisaa codsi kasta oo ay bixiyaan dawladaha hoose.
Waa maxay nooca saldhigga lacag -bixinta ee aan rakibayo?
Waxaa jira dhowr nooc oo saldhigyo lacag -bixin ah - oo ay ku jiraan Heerka 1, Heerka 2aad iyo Ku -dallacsiinta Degdegga ah ee DC - marka midka aad doorataa wuxuu ku xirnaan doonaa dhowr arrimood. Kuwaas waxaa ka mid ah kiisaska adeegsiga macmiilka ee la filayo, qiimaha iyo tixgelinta naqshada goobta.
Maxay yihiin qodobbada naqshadeynta goobta ee saameeya qiimaha rakibaadda?
Kharashka rakibidda saldhigga wuxuu dhaafi karaa qiimaha qalabka laftiisa waxaana saameeya dhowr arrimood oo naqshadeyn ah oo ay tahay in la tixgeliyo sida:
Adeegga korontada ee hadda jira. Dhammaan rakibaadda saldhigga lacag -bixinta ee cusub waa inay lahaadaan falanqayn culeys oo lagu sameeyo dalabka korontada ee xarunta si loo go'aamiyo haddii ay jirto awood lagu dari karo saldhigyada lacag -bixinta ee EV. Saldhigyada Heerka 2aad waxay u baahan doonaan wareegga 240-volt (40 amp) oo loo baahan yahay in kor loo qaado adeegga korontada.
Masaafada u dhexeysa guddiga korontada iyo saldhigga lacag -bixinta. Masaafada dheer ee u dhexeysa guddiga korontada iyo saldhigga lacag -bixinta ee EV waxaa loola jeedaa kharashyada rakibidda oo sarreeya maxaa yeelay waxay kordhisaa xaddiga qashin -qubka (iyo dayactirka), marin -biyoodka, iyo siligga. Waxaa la jecel yahay in la yareeyo masaafada u dhexeysa korontada iyo saldhigga lacag -bixinta ee EV sida ugu macquulsan iyadoo sidoo kale la tixgelinayo goobta saldhigga lacag -bixinta ee guriga.
Goobta saldhigga lacag -bixinta ee guriga. Tixgeli saamaynta saldhigga lacag -bixinta lagu meeleeyo meel gaar ah oo ku taal guriga. Tusaale ahaan, dhigashada meelaha baabuurta la dhigto ee saldhigga lacag -bixinta ee dhismaha gadaashiisa ayaa laga yaabaa inay niyad -jabiso isticmaalkooda, laakiin macaamiisha kale ayaa laga yaabaa inay ka xumaadaan haddii saldhigga lacag -bixinta lagu rakibo meelaha baabuurta la dhigto ee ugu badan oo weli bannaan sababtoo ah waxaa yar darawalada EV.
Tixgelinno kale ayaa saamayn yar ku leh kharashyada rakibidda laakiin waxay saamayn ku yeelan kartaa sida ay waxtar ugu leedahay saldhigga ka faa'iideysiga darawalada EV iyo macaamiisha kale. Qaar ka mid ah kuwan waxaa ka mid ah dariiqa xadhigga lacag -bixintu qaado marka la isticmaalayo iyo hababka maaraynta goobta baabuurta la dhigto.
Ma ku dallaci karaa dadka isticmaalka saldhiggayga lacag -bixinta?
Haa, waxaa laguu oggol yahay inaad dadka ka qaaddo isticmaalka saldhiggaaga in kasta oo milkiileyaal badan oo saldhigga ay doortaan inay ku dallacaan lacag -la’aan ahaan sasabasho ama dheef. Tusaalaha tan ayaa ah loo -shaqeeye u siiya shaqaalahooda iyo macaamiishooda lacag -la'aan. Haddii aad go'aansato inaad ku dallacdo isticmaalka waxaa jira dhowr arrimood oo la tixgelinayo si loo go'aamiyo waxa adiga kuu fiican.
Kharashka isticmaalka wuxuu ku xiran yahay goobta. Go'aankaagu wuxuu ku xirnaan doonaa qayb ahaan goobta ay ka shaqaynayso. Meelo ka mid ah Gobolka New York, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, garaashyada qaarkood ee lacag dhigashada baabuurta la dhigto ayaa laga yaabaa inay helaan macaamiil diyaar u ah inay si joogto ah u bixiyaan khidmadda EV sababtoo ah ma haystaan ​​awood ay gurigooda lacag uga qaadaan.
Ku -dallacaadda isticmaalka waxay ku xiran tahay ujeeddada rakibidda goobta. Faa'iidada ay soo saarto idaacaddu ma aha fursadda kaliya ee lagu soo celin karo maalgashiga saldhigga lacag -bixinta. Saldhigyada lacag-bixinta ayaa laga yaabaa inay soo jiitaan darawalada EV oo markaa ilaaliya meheraddaada, haysa shaqaale qiimo leh, ama bixiya dareenka wakiilnimada deegaankaaga oo laga yaabo inay gacan ka geysato soo jiidashada EV iyo dadka aan ahayn EV, shaqaalaha, ama macaamiisha.
Sida lacag -bixinta adeeggu u shaqayso. Milkiilayaasha saldhigga waxay ku dallaci karaan isticmaalka saacaddii, fadhi kasta, ama halbeeg koronto.
Saacadiiba: Haddii aad saacadba lacag ka qaaddo, waxaa jira kharash go'an oo baabuur kasta ha ahaado mid lacag -bixin ah iyo haddii kaleba, iyo baabuurta kala duwan waxay koronto ku helaan heerar kala duwan, markaa qiimaha tamarta ayaa si weyn u kala duwanaan kara iyadoo la soo dallacayo fadhiga.
Kulankiiba: Tani inta badan waxay ku habboon tahay goobaha lacag -bixinta ama saldhigyada lacag -bixinta oo leh fadhiyo aad u gaaban oo joogto ah.
Halbeegga Tamarta (badiyaa kilowatt-saac [kWh]): Tani waxay si sax ah u xisaabinaysaa qiimaha dhabta ah ee korontada ee milkiilaha saldhigga lacag -ururinta, laakiin ma siinayo dhiirigelin baabuur si buuxda loogu dallaco inuu bannaanka ka baxo
Qaar ka mid ah milkiilayaasha goobta ayaa isku dayay isku -darka hababkan, sida ku dallacidda qiime siman labada saacadood ee ugu horreeya, ka dibna sicir kordhaya oo loogu talagalay fadhiyada dheer. Goobaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay doorbidaan inay yareeyaan kharashaadka hawlgalkooda iyagoo aan ku biirin shabakadda saldhigga lacag -bixinta oo bixiya lacag -la'aan.
Waa maxay sababta lacag bixinta goobta shaqada aad muhiim ugu tahay?
Maaddaama dad badani u kaxeeyaan shaqada, darawalada EV -na waxay jecel yihiin inay ka bixiyaan lacagtooda mar kasta oo ay suurtogal tahay bixinta lacag -bixinta goobta shaqada waa faa'ido weyn oo shaqaaleeyeyaashu u leeyihiin inay bixiyaan. Dhab ahaantii, ku-dallacidda shaqadu waxay labanlaabmi kartaa shaqaalaha EV dhammaan korontada kala duwan ee socdaalka maalinlaha ah. Loo-shaqeeyayaasha, ku-dallacidda goobta shaqada waxay gacan ka geysan kartaa soo jiidashada iyo haynta shaqaale xoog leh waxayna muujineysaa hoggaan qaadashada teknolojiyadda tamarta nadiifka ah.
NYSERDA's Brochure Charging Goobta Shaqada [PDF] wuxuu bixiyaa dulmar guud oo ku saabsan faa'iidooyinka ku rakibidda saldhigyada lacag -bixinta goobaha shaqada iyo hagid ku saabsan geedi -socodka qorshaynta, rakibidda, iyo maareynta kaabayaasha lacag -bixinta ee EV
Waaxda Tamarta Kharashka Goobta Shaqada goobtu waxay bixisaa tilmaamo ku saabsan ka -qaybgalka shaqaalaha si ay uga faa'iidaystaan ​​dheeftan, iyo sidoo kale macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qiimaynta, qorshaynta, rakibidda, iyo maareynta lacag bixinta goobta shaqada
Waa maxay saldhigyada lacag -bixinta degdegga ah ee DC?
Ku-dallacsiinta degdegga ah ee DC waxay isticmaashaa wareejinta tamarta tooska ah (DC) iyo 480-volt beddelidda hadda (AC) si ay u siiso dib-u-dejin degdeg ah meelaha aadka loo isticmaalo. Iyada oo ku xidhan EV, saldhigyada lacag -bixinta degdegga ah ee DC waxay bixin karaan 80% dib -u -shubasho in ka yar 20 daqiiqo. Xawaaraha lagu dallaco waxay ku xiran tahay cabbirka baytariga baabuurka iyo qalabka wax lagu dallaco, laakiin EVs badan ayaa hadda ku dallaci kara in ka badan 100 kW (in ka badan 100 mayl oo kala duwan 20 daqiiqo gudahood). Ku -dallacsiinta degdegga ah ee DC ugu horreyn waa ikhtiyaar loogu talagalay korontada oo dhan baabuurta. EV-yada isku-dhafan oo yar ayaa isticmaali kara fiilooyinka degdegga ah ee DC. Waxaa jira saddex isku -xirayaal waaweyn oo loogu talagalay fiilooyinka degdegga ah ee DC; EV -yada isticmaali kara fiilooyinka degdegga ah ee DC waxay la jaan qaadi karaan mid ka mid ah kuwa soo socda:
Nidaamka Lacag -qaadista Isku -dhafan ee SAE (CCS) waa halbeeg lacag -bixin oo si weyn loo aqbalay oo ay adeegsadaan inta badan baabuurta sameeya
CHAdeMO waa halbeeg lacag -bixin caadi ah oo ay ugu horrayn adeegsadaan Nissan iyo Mistubishi
Shabakadda Supercharger ee Tesla wuxuu ku salaysan yahay tikniyoolajiyadda lacag -bixinta ee lahaanshaha oo kaliya ay isticmaali karaan baabuurta Tesla
Tiro ka mid ah shirkadaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa ka dhisaya saldhigyo badan oo lacag -bixin ah Gobolka New York iyo wixii ka dambeeya, oo ay ku jiraan Awoodda New York Power Authority, Electrify America, EVgo, ChargePoint, Greenlots, iyo qaar kaloo badan.